Archive du 20200416
Antananarivo Mitombo isa ny voan'ny Coronavirus
Nisy olona 2 vaovao voan’ny coronavirus indray omaly, ka nampiakatra ny isa ho 110. Samy eto Antananarivo avokoa ireo voa ireo, ka teny Antetezanafovoany sy Faravohitra no nahitana azy ireo, araka ny tatitry ny Pr Vololontiana Hanta Marie Danielle.
Rodoben’ny mpanohitra Mitaky mangarahara bebe kokoa
Nivory nanao jery todika ny resaka fahamehana ara-pahasalamana eto amin’ny tanin’ny Repoblikan'i Madagasikara omaly ny avy eo anivon’ny Rodoben’ny mpanohitra eto Madagasikara.
Dia an-tongotra Mahasalama saingy tsy tokony hatao be loatra
Zary lasa fiainan’ny maro hatramin’ny nanombohan’ny fihibohana no mankaty ny fandehanana dia an-tongotra ho an’ireo izay tsy maintsy mivoaka ny trano.
Fitotonganan’ny vidin-tsolika iraisam-pirenena Mbola tsy misy fiantraikany eto Madagasikara
Mbola tsy hita ny fiantraikan’ny fidinan’ny vidin’ny solika manerantany amin’izao fotoana izao raha ny eto Madagasikara araka ny fanazavan’ny Mpahay toekarena eo anivon’ny CREM, Rakotobe Vololonirina.
Paositra money special covid-19 Maimaimpoana ny fakana sy fandefasana vola
Tsy misy sarany avokoa ny fametraham-bola, ny fakana vola sy ny fandefasana vola mandritry ny 35 andro amin’ny alalan’ny “Paositra money special covid-19”,
Tototry ny kihana
Takon’ny raharaha coronavirus ny aferam-pifidianana teto Madagasikara, izay tena nafana sy tsy nahamarin-toerana mihitsy ny fitondram-panjakana. Sarotra ny raharaha teo,
Harikaren’i Madagasikara Hiharatsy tanteraka ny taona 2020
Nahatratra 5,2% ny tahan’ny fitombon’ny harinkarena ny taona 2018 araka ny tatitra navoakan’ny Banky Foiben’i Madagasikara (BFM) izay azo lazaina ho ambony raha oharina ny taona 2017.
Fanapoizinana ara-tsakafo Zaza 4 taona matin'ny Paty sy Mayonnaise
Zaza iray vao efa-taona monja no namoy ny ainy vokatry ny fihinanana paty nisy maionezy tany Mahajanga ny Alahadin’ny paska teo.
Fahazoana ilay fanampiana 100 000 ariary Misy fanontaniana 10 tsy maintsy valiana
Hotanterahina tsy ho ela ny fizarana ilay fanampiana ara-bola 100.000 Ar ho an’ireo fianakaviana hita fa sahirana sy marefo manerana ireo Boriborintany 6 eto an-drenivohitra.
Orinasa JB Amboditsiry Mpiasa an-tselika 686 tamin’ny asany
Mitombo isa hatrany ireo olona tsy an’asa eto amintsika. Taorian’ireo karazana orinasa maro samihafa dia tonga amin’ny dingana tsy azo hanoharana tsy
Tohana ara-tsosialy Mitombo ireo mangataka amin'ny fitondrana
Mivoaka mitady vola izahay hamelomana ny vady aman janakay, hoy ireo mpanera hazo eny Andravohangy sy Ambodivona.
Mponin' Ambatomaro Mangataka mba aterina isan-trano ny fanampiana
Mahatratra 2.000 isa ireo olona sahirana ara-pivelomana monina ao amin’ny Fokontany Ampanotokana, Ambatomaro, kaominina Antananarivo renivohitra amin’izao.
Olona mitsirara tetsy sy teroa Mitoetra hatrany ny ahiahy
Mampanahy ihany ny nahita ireo olona efatra izay nitsirara tetsy sy teroa teto an-drenivohitra.
Vatsy Tsinjo Lany amin’ny fanadihadiana ny fotoana
Raha tokony ho tamin’ny 7 ora maraina no nanomboka ny fitsinjarana ny Vatsy Tsinjo tetsy amin’ny CEG Avaradoha dia nisy fahatarana ora 2 be izao vao nampidirina ny olona miisa 10 voalohany.
Ady amin'ny Coronavirus Fitaovana milanja 2 taonina tonga teny Ivato
Tonga teny Ivato omaly tokony ho tamin’ny 10 ora maraina ny fanampiana andiany faharoa milanja 2 taonina eo ho eo avy amin’ny Fondation Jack Ma tantanin’ilay mpanefoefo Sinoa Jack Ma sy ny OMS.
Mpandeha an’arivony tonga ao Mahajanga Maro be ireo nanao sambo nilentika
Misy ny antso avo natao ho an’ireo olona an’arivony maro tonga tao Mahajanga nandritra ny telo andro (7-9 aprily) nanomezan’ny Filoham-pirenena fahalalahana hody an’ireo tavela teto Antananarivo.
Ady amin'ny Coronavirus 444,1 tapitrisa dolara no vola azon'i Madagasikara
Mitentina 444,1 tapitrisa dolara ny fanampiana avy any ivelany azon'i Madagasikara mba hiadiana amin'ny Coronavirus araka ny nambaran'ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola omaly.
Lalatiana Andriatongarivo "Hihamafy ny fepetra raha mbola goragora isika"
Nanao ny tatitra tamin` ny haino aman-jerim-panjakana momba ny COVID-19 ny minisitry ny serasera sy kolontsaina no sady mpitondra tenin'ny governemanta, Lalatiana Andriatongarivo omaly.
Mararin'ny Coronavirus eto Madagasikara Mijanona ho tsiambaratelo aloha ny momba azy ireo
Ny minisiteran’ny fahasalamana no tompon'andraikitra feno momba ireo marary tsaboina noho ny Coronavirus.
Olona mody an-tanindrazana Voaramaso tsara ve ny fahasalaman'izy ireny?
Mbola maro ny olona no mamonjy ny tanindrazana na lavitra aza noho ny tahotry ny Covid-19.
Mpitsabo 2 voan` ny Coronavirus Efa miha salama
Miisa telo ny sokajin` olona voalaza ho marefo ka mora handairan`ny aretina “coronavirus”.
Fahazoan-dàlana manokana Hanara-maso akaiky ireo fiara ny fanjakana
Anisan’ny nahazoana fitarainana ny mikasika ny fahazoan-dàlana manokana nosoniavin’ny Filohan’ny CCO Covid-19.
Olona voan` ny Covid-19 efa sitrana Voahilika eny amin` ny fiarahamonina
Mahatsiaro tena voahilika eny amin` ny fiarahamonina ireo olona sitrana izay nitondra ny tsimokaretina COVID-19, araka ny fitarainana voaray teny anivon` ny Brigade d`intervention special (BIS).